HADDII CIISE MASIIX TARDE IMANAYA, kiniisadda ka yar baaba’aan Abuurida! | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Sida ii, qof walba arki kartaa in rayrayn kaniisadda ma qaadan meel on September 13 iyo in Ciise Masiix jidh ahaan ma ku soo laabtay Earth on 14 ama 15, ama xataa dhamaadka Bisha September 2015.
Aan dhexmarayay in qaar ka mid ah in ay taasi soo laabtay dhici kara wakhtigaas of articles aan iyo khalad waxaan ahaa!
Tani ma aha markii ugu horeysay. Laakiin sida aad ogtahay sida nebi oo kale ma ihi!
Si kastaba ha ahaatee, tan micnaheedu ma aha inaannan ahayn kuwo aan dhamaadka waqtiga ka hor soo laabashada Ciise Masiix.
Halkii, dhacdooyinkii September dhab ahaan jiray calaamado aad u xoog badan.
Waxaan aragnay weyn oo ka sii daraya ee dagaalka Suuriya ka qaybqaadashada firfircoon ee ciidamada dalka Ruushka oo ka qayb ah dadban markii ciidanka Shiinaha.
Waxa kale oo aanu helay in Pope Francis bayaan cajiib ah intii uu safarka Maraykanka intii uu khudbadiisa ugu St Patrick ee Cathedral.
Tarjamada Pope ee degaanka:
« Cross ayaa noo muujinayaa hab kale si ay u cabbirno najaxa.Anaguna waa ay u aasaan abuurka. Eebana waa arkaa midhaha ah ee shaqadayada. Oo haddii had iyo jeer dadaalka iyo shuqullo waxay u muuqdaan in ay ku fashilmaan oo aan midho, aan waa inay xusuustaan ​​in annaguse waxaannu nahay xertii Ciise Masiix, iyo nolosha, sida aadanaha u hadla, ayaa ku dhammaaday fashil, ka failure iskutallaabta. «
Waxa uu dhicin inuu caddeeyo in nolosha iyo allabari oo ah Ciise Masiix ayaa ku dhammaaday fashil iskutallaabta « failure ku saabsan iskutallaabtu. »
Pope waa hogaamiyaha ugu sarreeya kaniisadda Catholic, waxaa uu war saxaafadeedkiisa laguma qaadi karo khafiif ah.
Waxaa ka Garataa guud ee ilaahnimadiisa Ciise Masiix oo u dhiganta ku dhawaaqii rasmiga ahaa dhimashada Diinta ee Vatican iyo sidaas u sii xaqiijinaysaa aan article: « Masiixu wuxuu noqday siyaada ah iyo qayb ka mid ah Vatican Museum »
Isaga oo qoraal ah waa in lagu galaa waxa ay ku guuldareysteen oo Beeniyey Ciise Masiix.
« Waxaa cad in Quduuska Catholic Church naga waxaa si rasmi ah u geeriyooday dalka Maraykanka ee St. Patrick ee Cathedral ee sacab. «
Tani qoraal ah Pope Francis waa calaamad aad u xoog badan kitaabiga ah ee times dhamaadka « Ridada » kaas oo ku dhawaaqday soo laabtay dhaw Ciise Masiix.
Erayadiisii ​​uga By Pope ayaa rasmi Ridada Vatican iskutallaabta Quduuska Catholic Church our.
Waxa uu ka tagay iska aamusay oo dhan waa Kirishtaan ee adduunka si hadaladiisa on « failure Ciise Masiix » waa istaahilin bedeli ee Peter iyo aflagaado inay Ilaah, Ciise Masiix, ayaa kiniisaddii iyo iimaanka.
Waayo, waxaa inoo Nasaara, Francis Pope la socda hadaladiisa adhijirka wanaagsan iyo wakiilka istaahila in Masiixa on Earth iyo xitaa sameeyey Vatican ayaa sidoo kale mar dambe meel oo ka mid ah Church of Quduuska Fiiri Catholic.
Quduuska Fiiri ee Kaniisadda Catholic hadda waa ilaa laabashada Rabbigeenna Ciise Masiix qalbiga Christian kasta.
Kulligayo waxaannu noqonnay, walaalahaygii aan jeclahayow wiilal iyo gabdhoba, kusugan iimaanka iyo hadalkii Ciise Masiix.
Laakiin Pope si rasmi ah weli Pope iyo waa in aan u ixtiraamaan.
Waa in Ciise Masiix, ee uu ka soo laabtay, in Pope Francis xisaabtami doono; Sida oo dhan oo naga mid ah amar in. Ha illoobin in waxaanu wada nahay dembiilayaal!
Ciise Masiix, Wiilka keliya ee Ilaah aqbaleen jacaylka noo dullaysan, caayay, xadgudbo, karbaashay oo ugu dambeyntii ku qodbeen inay inaga furto oo dembiyadeenna.
Waxaa iyada oo allabari, oo ah dhiig iyo jacaylka Ciise Masiix in Albaabbada Samada waa naga fur.
Iskutallaab ku Ciise Masiix ma aha natiijada guuldareysanay, laakiin allabariga maarmaan taas oo uu isku ahaa ina Ilaah buu ka sameeyey, inay wax ka qabtaan oo ay jacaylkiisa iska dembiyadii oo dhan way u imanayaan oo sidaas noo qiil Ilaaha Aabbaha ah ka hor.
Sida Ilaah ka sare kiciyey Ciise nolosha saddex maalmood xabaasha ku jiray ka dib, Ilaah jacayl, allabari oo dhiigga Ciise Masiix siin doonaa inuu cafis iyo saf doonaa nolosha xisaabta ee la soo dhaafay oo dhan, kuwa iman doonaa, Ciise Masiix.
Sidaas awgeed, waxaan ku raaxaysan karaan nolosha weligeed ah ee Jannada, maxaa yeelay, waxaynu ku badbaadnay doono iyo in weligoodba la midoobi doonaan in ay Ciise Masiix.
Ciise Masiix waa sida kaliya ee ay ku soo galaan, boqortooyada jannada!
Waa in aan mar kale iyo mar kale ku baryayaaye, na badbaadi, oo si aad u hesho caawimaad maalin kasta Ilaah waa lagama maarmaan noo ah ee xiliga adag ee soo daahay.
Waxaan sidoo kale u baahan tahay si ay u tukadaan badbaadinta Pope Francis, binu-aadmiga oo dhan, walaalaheenna iyo Rabbigeenna Ciise Masiix soo laabtay degdeg ah
Waa inaan rumaysano in Church oo hore iyo nasiib darro ahayd sii wadaan in ay la silcin adduunka, haatan si rasmi dhintay.
Sidaas awgeed, waxaan tihiin Brothers uu jecel yahay iyo Sisters waxaa barooranaya oo dhan oo kaliya sugayaan Eebahanno iyo King Ciise Masiix.
Xaqiiqada ah in Pope ayaa si cad u beeniyay in Ciise Masiix dhab ahaantii ka tagis kaniisad aamin xooggan u muujinayso in Ridada hadda runtii waa dhameystiran iyo guud.
Si uu markaas dhici doona hadda?
Dabcan waxaan ku soo dejin kartaa oo keliya xubno ka mid ah wax ka qabashada ee dhismaha fikradahaaga.
Kuwani waa fikrado ah oo aan wax sii sheegiddii …!
Pope Francis u muuqataa in uu noqdo hogaamiyaha adduunka ee urur ee diimaha oo dhan. Waxaa hubaal ah ugu dhakhsaha badan abuuri doonaa a O rganization of R eligions lagu tilmaamey laga yaabaa in ay « OR » Waa laga yaabaa in in image ee Qaramada Midoobay « UN. »
Waxa iyaduna si ay sheegayaan in Masiixiyiinta ah kuwaas oo ku biiri ama taageeraan ururka diinta bini’aadamnimada oo kale ayaan weli ka socda waxbarista Ciise Masiix.
Waxba isma bedelin, ay nasiib doonaa garaaca ee musiibada sii iyo mar kale iyo mar kale xoojin ilaa soo laabashada Ciise Masiix.
In ka War of Armageddoon
Waxaan ku qanacsanahay in ay tahay in Suuriya, iyo in ay sii wadi doonaan weerar lagu qaaday Israa’iil in uu bilaabo inuu ku noolaado iyo bilowgii dagaalka sokeeye la intaas oo dhammu waxay weerarada ay ku Yuhuudda lama filaan ah u mindiyo.
Wixii Dhaqaalaha Adduunka:
In kasta oo ay Russia iyo China dhigay nidaamka madax bannaan ee lacagaha iyo ganacsiga, lahayd nacasna ha noqon, inay aaminsan yihiin in Mareykanka ayaan weli aqbali doono burburkii lama huraan ah dollar ah.
The horay Maraykanka in uu inaga dhigo tallaabo halkii bixitaankooda adduunka ah oo aan lacag caddaan ah oo sidaas daraaddeed ku salaysan kaliya credit.
Maraykanka ayaa raba in ay soo rogaan iyo aad u badan tahay in credit caalamka lagu maamula EDF ah.
Oo sidaas waa dunida oo dhan u noqon doonaa sida addoonsiga iyo ka daajinayay qaban doonaa caalamka guud Credit, Mareykanka uu noqon doono si rasmi ah ugu sayidkooda dunida.
Waayo, ururka of Politics Adduunka:
Waxaan aad u muuqata inay kala qaybsameen geopolitical dunida iyadoo la abuurayo doonaa awoodaha super weyn:
« Waqooyiga Ameerika – Russia – China – India – AFRICA – YURUB – AUSTRALIA – South America – Japan – Korea »
Sida aad arki karto East ma liiska ku jiro, sababtoo ah waxa ay u muuqataa in wax walba waa meel si ay u dhexgalaan Yurubta Bari,halkaas oo hirarka muhaajiriin soo socda uu gadhwadeen ka degaan iyo magan qaado halkii ay u socdaan si ay u degaan ama halleeya ee Saudi Arabia ee Masar ama dalal kale oo Muslim kula cufnaanta sare.
Ha u malaynina waxay u yimaadeen inay hoos u degaan iyo halleeya Yurub tan iyo sanadkii 1948 waxa uu ahaa fursad!
Taasi cad dhinaca waxa Waxaan qabaa inaan u samaynta weynGaartay.
Khasaare weyn ee maleyaashaa doonaa dabcan kiristaanka in la outvoted ee Europe.
« Ishaartay iimaanka Christian
Islamic u noqotay! «
Church Catholic ayaa u muuqda mid lagu xukumay baaba’aan, waxaana qabaa tani u dhici kartaa in ka yar hal qarni!
Waxaan aragnaa in Shaydaanku waa siyaasi iyo haddii Ciise Masiix ma aha soo socda, ma uu heli rumaysad uu ku soo laabtay. (Luukos 18: 7,8).
Oo taasu waa i jecel yahay Brothers iyo Sisters in Ciise Masiix, mustaqbalka mustaqbalka Christian ah iyo kaniisadda u muuqdaan in ay la baaqsaneeyn saadaasha geopolitical istiraatijiyadda weyn iyo siyaasiyiinta ee caalamka.
Maxaa iyo waxa aannu ku samayn kartaa!
Inaynu karaa hab sharci ah ay uga soo horjeedaan go’aanada ay qaadeen, kuwaas oo sare siyaasad-dejiyeyaasha caalamiga ah ee caawinaya inay doortaan xisbiyada siyaasadda samaynta dagaalka barnaamijka doorashada socdaalka ka dhanka ah.
Laakiin aan xambaarro masuuliyada cawaaqib ah …! (Violence iyo Madaniga Wars!)
Waxa kale oo aanu muujin karaan iyo dalabka laakiin waxaa hubaal ah in aan tegi doonaa kuwa sharka ah.
Sidaas ha noo xusuusataan in Ciise Masiix ayaa na weydiisatay inay u rumaysan weydeen, si ay u caawiyaan, inay noo deriskaaga u jeclaataa oo noqon dhabanka kale haddii uu naga dhufan.
Sidaas rajada keliya ee noo been iimaanka ee laga helo Rabbigeenna Ciise Masiix iyo King, Wiilka keliya ee Ilaah, kan inoo ballanqaaday in kaalay oo na badbaadi in dhamaadka waqtiga.
Ciise Masiix ayaa balan qaaday in ay kaalay oo na badbaadi dhammaadka wakhtiga iyo markaas aan la xaqiijiyey in uu yabooh si dhakhso ah u hayn doonaa. Waa xaqiiq ahaan.
Ka dhig rumaysadka uu hadalka, maxaa yeelay, hadalkaagu waa run e.
Ciise Masiix waa boqorkayga
Dhammaanteen waxaan u baahanahay in ka yeelno oo Ilaah u barya uu si degdeg ah ugu laabto, maxaa yeelay, waxaan aragnaa in times dhamaadka ayaa waxaa durbaba ka dhigay.
Waan ogahay in badan oo ka mid nahay walaalo waa baabba ‘, maxaa yeelay, ma afduubka lagu qabtay bisha September 2015.
Lakiin waxa ay u Rabbiga waa mid dhow, waa ay dhici kartaa mar kale laga yaabaa sanadkan, 2015.
Calaamado badan oo u ogolaan in ay aad uga fiirsada, laakiinse Ilaah waa mid ka mid ah si ay u go’aamiyaan maalinta iyo waqtiga soo celinta Ciise Masiix.
Maxaa muhiim u ah qof kasta oo inaga mid ah waa in ay tukasho ku baridaan Ilaah caawimaad in ay ka gudbaan gudcurka qarada soo duulay in adduunka iyo in daah iftiinka iimaanka ka mid ah dad badan oo ka mid ah hadaan nahay walaalo.
Ha ololkii rumaysadkeenna fiican nalka iyo ammaan ka kharribaadda dunida ah, waaba intaasoo waxaa iska tagaa ee ceeryaan waqti.
Ciise Masiix waa albaabka our. Laakiin Ilaah keliya ayaa go’aamiya marka ama waxaa ku layn doonaa. Sug oo ku waari dhexdeeda ku haya jacaylka Ciise Masiix iyo in la raacayo sharciyada Ilaah.
Ha noo reyreeya, waayo, dhammaan calaamadaha iyo waxsii sheegista ku dhawaaqo maalin kasta si xoogan soo laabtay dhaw Ciise Masiix.
Ka dhig iimaanka in runtii uu si degdeg ah ugu laabto.
In la eegaayo in soo laabashada Ciise Masiix ku tukadaan, oo caawiyo kuwa Ilaah noo soo diro.
Ina keena aynu la xaqiijiyey in Ilaah na jecel yahay iyo in Ruuxa Quduuska ah oo maalin walba naga caawin doontaa ilaa soo laabashada Ciise Masiix.
Xusuusnow in aad u hesho gargaarka Eebana waa inaan la daacadda iyo xukunka weydiin halkan Salaadda mar kasta oo aan u baahan tahay.
Ilaah na siiyey doonista xorta ah oo sidaas daraaddeed ma fara-nolosheena haddii aanan weyddiiyaan.
Waxaan kugu casuumeynaa in aad weydiiso ilaahay inuu ku hanuuniyo nolol maalmeedkaaga si uu u sii joogo wadada.
Tani ma aha markii ugu AY HAKAD GELIYEEN, Ciise Masiix baa nala jira ugu dhakhsaha badan oo soo laabtay nolosheena loo badali doonaa.
Si aad u ogaato waxa dhici doona ka dib markii uu soo laabashada Ciise Masiix, waxaan idiin ku yeedhi xagga akhriya article:
Fadlan Gacaliyayaalow Walaalayaal in Masiixa xiriiro cinwaanka blog in aad xiriirka la leedahay.
Ha noo oo dhan ay noqdaan ciidan Masiixa oo ka shaqeeya in la faafiyo eraygii wanaagsanaa « Ciise Masiix ugu soo laabtay dhakhsaha badan »
Soo jeeda oo tukada.
Ha jacaylka iyo nabaddu Ciise Masiix ha idinku ah.